musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Chiziviso Chitsva cheGlasgow cheKuita Kwemamiriro ekunze muKushanya Kwakatangwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kutarisirwa • Sustainability News • Switzerland Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
PaCOP26 Climate Summit svondo rino, Tourism Declares a Climate Emergency, chirongwa chekutsigira mamiriro ekunze, ichazivisa kuti chave chirongwa chepamusoro chemamiriro ekunze cheTravel Foundation. Pamusoro pezvo, iyo Travel Foundation ichaburitsa basa rayo rakasiyana mukupa rutsigiro runoenderera mberi kune ichangobva kutangwa "Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism", ichishanda pamwe neWorld Tourism Organisation (UNWTO) yeUnited Nations.
Zviziviso zvese zviri zviviri zvinoisa Travel Foundation pamberi pekuedza kuona mabhizinesi ekushanya nenzvimbo dzekushanya anogona kukurumidza kubvisa carbon, kuenderana nekushanduka kwemamiriro ekunze, uye kutsigira kuvandudzwa kwe ecosystem.
Travel Foundation uye UNWTO vari kutsvaga kudyidzana kuti vakurumidze zvinangwa zvechirongwa ichi.
Vari kusundirawo zvishuwo zveGlasgow Declaration pamwero wekuzadzisa zvinangwa zvemamiriro ekunze pasi rose.
The kutanga kweGlasgow Declaration paCOP26 musi wa4 Mbudzi inoratidza chiitiko chakakosha chechiitiko chemamiriro ekunze mukushanya. Vese vari vaviri Tourism Declares neTravel Foundation vaive nhengo dzevashanu-mapato Drafting Committee yeDeclaration - kuzvipira kwepasirese kumasangano ese ari mukufamba nekushanya kuti abvise kuburitswa kwechikamu nepakati panosvika 2030, kuenzanisa zvirongwa zvemamiriro ekunze mu "nzira shanu," uye kuzivisa pachena mafambiro aita.
Masangano ese ari mukufamba nekushanya anokurudzirwa tsigira Chiziviso, uye Tourism Declares' basa richava rekureverera, uye kukonzeresa, kukurumidza kuita kwemamiriro ekunze nekusimbisa kuenzana kwemamiriro ekunze uye kusimba, uye zvinodiwa nenharaunda dzekuenda.
Nekuunza Tourism Declares mukati mesangano rayo uye nekubatana neUNWTO kutungamira chirongwa cheGlasgow Declaration kumberi, iyo Travel Foundation inosimbisa basa rayo rinotungamira sesangano rekuenda kusangano rekuita kwemamiriro ekunze mukushanya. Ichatanga chirongwa chezviitwa zvakanangana nezviitiko zvakaita se:
Kuburitsa gwaro rekufambira mberi kwegore reGlasgow Declaration, richipa ongororo yekuti ndiani akasaina Chiziviso, uye kuti vari kufambira mberi sei nezvisungo zvavo.
Kugadzira nzira dzinoenderana, dzakapamhama-matanho ekuyera kabhoni uye kushuma.
Kuedza nzira itsva dzekugadzirisa dzakaoma, dzakagovaniswa mabasa pasi pe "scope 3" (value chain) emissions, iyo inowanzoitika mukati mekuenda.
Kusimbisa kubatana uye nharaunda - semuenzaniso kuburikidza neTourism Inozivisa nharaunda yepamhepo uye network yevanozvipira, uye kuumbwa kwakarongwa kwenzvimbo dzematunhu.
Kuvaka kugona kweGlasgow Declaration signatories, uye kuwedzera ruzivo rwakakosha, maturusi, uye kurudziro inodiwa pakuchinja kwechikamu.
Iyo Travel Foundation ichatungamirawo kurongeka kweKomiti Yezano yeGlasgow Declaration iyo ichasangana mukati mehurongwa hweUN's One Planet Sustainable Tourism Chirongwa kuona kuti kusiyana, kuenzana, uye sainzi yemamiriro ekunze vari pamwoyo pechirongwa ichi. Iyo nzira yekuzivisa mamiriro ekunze yakabatana neGlasgow Declaration ichatungamirwa zvakare kuburikidza neOne Planet Network.
Jeremy Smith, muvambi weTourism Declares a Climate Emergency, akati: “Chiziviso cheGlasgow hachisi chisungo chete – kuzvipira kuita danho rekudzikisa nepakati kuburitswa kwevashanyi panosvika gore ra2030, uye kuzivisa mafambiro akaitwa gore rega rega. Zvakakosha kuti titange nevavariro chaiyo, asi ipapo basa rakaoma rinotanga. Kuve chikamu cheTravel Foundation kunotitendera kuti titore kuedza kwedu kune imwe nhanho yepasirese. "
Jeremy Sampson, CEO weTravel Foundation, akati: “Tinoziva kuti tinofanirwa kushandirapamwe uye kukwira sezvatisati tamboita, tichibatanidza nzira dze‘pamusoro-pasi’ uye ‘pazasi-kumusoro’ nekukurudzira kuita kwenharaunda nekugadzira nzira dzeshanduko muhurumende dzese. uye makambani. Shanduko yeTourism kuenda kune yakanaka mamiriro ekunze ndeyezve shanduko yekushanya zvakanyanya, ichichinjika kune imwe yakaenzana modhi inoenzanisa zvinodiwa nevagari nemabhizinesi uku ichitarisira nekudzikisa mutoro wayo kunzvimbo dzekuenda."
Iyo Travel Foundation uye Tourism Declares ichave ichitora chikamu muchiitiko chepamutemo cheCOP26 chepamhepo kuratidza kuvhurwa kweGlasgow Declaration, neChina, Mbudzi 4, pa1400-1600 GMT pamwe chete nevabatsiri KushanyaScotland, NECSTourR uye Remangwana reTourism Coalition. Unogona kunyoresa kujoina uye kutora chikamu munhaurirano pano.